Gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo lagu qabtay magaalada Boosaaso (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo lagu qabtay magaalada Boosaaso (SAWIRO)
Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland ay halkaasi ku qabteen gaari ay saaran yihiin walxaha qarxa iyo labo nin oo gaarigaasi la socotay.
Gaarigaasi la qabtay oo noociisu yahay kuwa xamuulka qaada ayaa waxaa saarnaa agabyo kala duwan, waxaana agabyadaasi ka mid ahaa qalabka isgaarsiinta oo ay ciidamadu isticmaalaan, dharka ciidanka, taargooyinka gawaarida ee laga isticmaalo Koonfurta Soomaaliya iyo Somaliland.
Taliyaha ciidanka booliska gobolka Bari C/xakiim Yuusuf Muuse oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in gaariga la qabtay uu waday khudaar lagu soo dhex-qariyay walxaha qarxa, islamarkaana uu ka yimid dhinaca magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
“Gaariga la qabtay waa nooca ay Soomaalidu u taqaano Candho-Maydle (UD), waxayna ciidanka ammaanka ku qabteen Kontroolka laga soo galo magaalada Boosaaso, waxaana saarnaa khudaar lagu soo dhex-qariyay walxaha qarxa, waxaana la doonayay in shacabka Boosaaso lagu dhibaaateeyo” Sidaasi waxaa yiri taliyaha ciidanka booliska gobolka Bari C/xakiim Yuusuf Muuse.
Dhinaca kale, taliyaha ayaa sheegay inay haatan socdaan baaritaano dheeraad oo la xiriira cidda loo waday agabka qaraxyada iyo halka loogu tala-galay qalabka isgaarsiinta ciidanka.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in baabuurkaan uu soo maray dhammaan kontoroolaadii Puntland laga soo bilaabo magaalooyinka Galkacayo, Garoowe, Qardho iyo kuwo kale, balse ugu dambeyn lagu qabtay Kontroolka Boosaaso.
Si kastaba ha aahatee, waa markii labaad ee muddo labo bilood gudaheed ah magaalada Boosaaso lagu qabto gaari ay saaran yihiin walxaha qarxa iyo raggii watay.